Qaybo ka mid qaboojiye
Shenzhen Hero-Tech Qaboojiyaha Qalabka Co., Ltd. ayaa ku hawlan in industry qaboojiye. Waxaan ku soo lifaaq ugu muhiimsan in ammaanka macluumaadka macaamiisha iyo qeybiyaha. Boggan waxaa tusaayaal siyaasadaha our marka la eego ilaalinta macluumaadkaaga shakhsiyeed.
1. Compliance sharciyada iyo xeerarka kale
Waxaan u hoggaansamaan sharciyada qaranka iyo siyaasadaha iyo xeerarka kale ee la xiriira ilaalinta macluumaadkaaga shakhsiyeed.
2. Dhismaha iyo Enhancement joogto ah Guidelines Information Personal qabashada
Baahida loo qabo in la ilaaliyo macluumaadka shakhsiga ah waxaa si fiican u dajisay oo dhan shirkadda, ka agaasimayaasha wuxuu hoos ugu dhaadhacaa shaqaalaha ugu yar. Waxaan u ilaaliyaan oo raac tilmaamaha ilaalinta ku haboon iyo isticmaalka macluumaadka shakhsi ahaaneed. Waxaan sidoo kale ku dadaalnaa si loo hagaajiyo tilmaamahan si joogto ah.
3. Helida, Isticmaalka iyo Bixinta Macluumaadka shakhsiga
Waxaan si cad u qeexaya isticmaalka kaas oo macluumaad shakhsi ah la gelin karaa. Miyaa gudahood, aan ka Dhuxul qaadanno, isticmaalaan iyo sii daayo macluumaadka shakhsiyeed oo kaliya ogolaanshaha qofka ay khusayso.
4. Maamulka Secure
Waxan ku dadaalnaa in maamulka ammaan ee macluumaadkaaga shakhsiyeed, oo ku adkeeyey tallaabooyinka lagama maarmaanka ah si looga hortago in ay helaan xogta aan la ogalayn, khasaare, burburinta, Ebana ama wax yaabaha.
5. Daah iyo Correction
Codsiyada siidaynta, tafatirka ama tirtirka macluumaadka shakhsiga ah waa in la ajiibay on kiis by salaysan kiis ilaa xaqiijinta aqoonsiga codsadaha.
* Fadlan si toos ah wax su'aalo ah oo ku saabsan xogta gaarka ah si ay Shenzhen Hero-Tech Qaboojiyaha Qalabka Co., Division Arrimaha General Ltd..